Barnaamijka Gargaarka Kirada Degdegga ah
Caawimaad Ma U Baahan Tahay Samaynta Bixinta Kirada?
Haddii aad dalbatay brograamkaan kaddibna laguu ogolaaday AMA haddii aad dalbatay balse aadan weli war ka maqlin: Fadlan dib ha u soo dalbanin! Casriyeynta brograamka munaasabka waxaa lagu dabaqi doonaa arjigaada. La xariir CAA haddii aad qabtid su'aalo.
Wakaaladaha Hawsha Bulshada Maine (Maine's Community Action Agencies) (CAAs) waxay bixiyaan lacagaha axsaanka kirada iyo danabka si ay u kaalmeyaan kireysteyaasha xaqa u yeesha. Wakaaladaha Hawsha Bulshada Maine (Maine’s Community Action Agencies) waxay fiirin doontaa arjiyada, waxay hubsan doontaa xaq u yeelashada, iyo waxay ka shaqeyn doontaa bixinta kharashka la ogol yahay iyadoo mattaleyso reeraha.
Dakhliga reerkaada waa in uu la kulmo xuduudda dakhliga qaar. Xuduudda waxay ku kala duwan yahiin goobta iyo tirada reerka. Halkan guji si aad u aragto in dakhligaaga uu ku jiro xadka barnaamijka.
Hal qof ama ka badan oo ka tirsan reerkaada waxay dhibaato maaliyad kala kulmeen cudurka dillaacay.
Dhibaato Miyaad Ku Qabtaa Bixinta Kirada ama Danabka
Codso khadka tooska ah
Waxaan aaminsanahay in arrimihii nidaamka dalabka ee aan haysanay markii barnaamijka la furay la xaliyay. Haddii aad arrimo ka qabto arjiga markaad codsaneysid fadlan wac Hay'adda Waxqabadka Bulshada ee deegaankaaga.
Si aad u dalbato khadka tooska ah dooro degmada aad hadda ku nooshahay waxaanan kugu toosin doonnaa hay'adda saxda ah.
Halkan ka degso codsi.. Waxaad ku soo diri kartaa arjiga emayl ama boosto u dirtaa Hay'adda Waxqabadka Bulshada ee deegaankaaga. Haddii aad ubaahantahay warqad codsi ah, fadlan wac MaineHousing 1-800-452-4668 anaguna mid baan kuu soo diri doonaa.
Su'aalaha Badanaa la Weydiiyo Dagganaha
Hore ayaan u codsaday barnaamijka, miyay tahay in aan dib u codsado?
Maya. Haddii aad codsatay oo lagu oggolaaday ama haddii aad codsatay oo aanad dib uga maqal codsigaaga weli uma baahnid inaad mar kale codsato! Haddii aad codsatay oo laguu diiday iyadoo lagu salaynayo in dhibaatooyinkaaga dhaqaale ay yihiin kuwo la xidhiidha COVID la xidhiidh Wakaaladda Waxqabadka Bulshada ama ururka dhaqanka ku salaysan ee ka qayb qaadanaya barnaamijka.
Yaan wici doonaa haddii aan qabo su'aalo ku saabsan brograamkaan?
Haddii aad qabtid su'aalo guud oo ku saabsan brograamka, fadlan wac MaineHousing, telefoonka 1-800-452-4668. Haddii aad qabtid su'aal gaar ah oo ku saabsan arjigaada, fadlan wac xafiiska CAA ee ku yaal xaafadda ururka dhaqanka ku salaysan ee ka qayb qaadanaya barnaamijka.
Ma leyga saari karaa inta aan sugaayo maaliyaddaan?
Haddii aad la kullantid saarid, ama aad ka cabsaneysid in lagu saaro, fadlan la xariir Kaalmada Sharciga Pine Tree (Pine Tree Legal Assistance) ama Adeegyada Sharciga Waayeelka (Legal Services for the Elderly). Waxay haystaan maaliyad ay kugu kaalmeyn karaan xattaa haddii aadan xaq u yeelanin brograamkaan.
Lacagta miyaa ka dhamaan doonto brograamka?
Inkastoo aan ballan qaadi karin, waxaan rajeyneynaa in Maine haysato maaliyad ku fillan si loo kaalmeeyo dhamaan kiresteyaasha xaqa u yeesha kaalmada.
Maxaa ku cusub wareegaan kaalmada kirada?
Casriyeynta brograamkaan waxaa laga helaa waxa soo socdo:
Brograamkaan wuxuu iminka dabooli karaa ilaa 12 bil bixinta kiradaada.
Brograamkaan wuxuu kaalmeyaa kiresteyaasha xaqa u yeesha ee la kulmay dhibaato maaliyad inta uu socday cudurka faafa (baddalkii cudurka faafa awgeed).
Waxaan maalgelinaa Pine Tree Legal Assistance xagga mattalaadda sharciga dagganaha ku sugan kiisaska ka-saaridda guriga.
Xaggee ayaan ka heli karaa wararkii ugu dambeyay brograamkaan?
Fadlan buuxi foomka hoose si aad ugu biirtid liiska emailkena si aad u heshid macluumaadka ugu dambeeyo Brograamka Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program). Waxaan wadaagi doonaa wararkii ugu dambeyay ee ku saabsan brograamkaan via liiska emailka, waxaa lagu soo gelin doonaa halkaan iyo meelaha la soo geliyo miidiyahena bulshada.
Maxaa dhaca haddii maamulaha hantida uusan ka soo qeybgalin brograamkaan.
Weli waad dalban kartaa. Xattaa haddii milkiilaha guriga uusan ka qeybgalin, waxaad arjigaaada(Codsigaaga) ku soo dartaa macluumaadka lagala xariiri karo. Kaddib marka ay helaan ogeysiis ah in aad dalbatay, waxey haysan doonaan 5-7 maalin oo ay ku buuxiyaan dukumentiyadooda kuna soo celiyaan. Haddii aysan buuxinin warqadaha/dukumentiyada ama aysan nala soo xariirin, adiga ayaan kula shaqeyn doonaa.
SU'AALAHA HAWSHA ARJIGA
Sidee ayaan ku dalbadaa?
Waxaad ka dalban kartaa boggaan marka aad kor u socotid meesha ay ku qoran tahay "Arji" ("Application").
Internetka ka dalbo: Riix menuuga hoos u soo dhaco kaddibna dooro dagmadaada. Riix "Ka Dalbo Internetka Iminka” kaddibna buuxi arjigaada.
Ku soo dalbo arjiga warqadda: Waxaad soo dejisan kartaa barnaamijka kore oo daabac. Soo dir ama keen codsigaaga oo dhamaystiran iyo koobiyada waraaqaha aad u baahan tahay si aad u codsato CAA deegaankaaga ama ururka dhaqanka ku salaysan ee ka qayb qaadanaya barnaamijka. Waxaad sidoo kale wici kartaa MaineHousing, 1-800-452-4668 waxaanan kuugu soo diri karnaa nuqul.
Maxay tahay taariikhda ugu dambeyso ee la dalbado?
Arjiyada waxaa la qaban doonaa in yar kaddib marka la soo gudbiyo ilaa Sateembar 2022.
Macluumaadkee ayaan u baahanahay in aan dalbado?
Kiraystayaasha iyo mulkiilayaashuba waxay u baahan yihiin inay bixiyaan macluumaadka marka ay dalbanayaan. (Haddii aad tahay kirayste oo mulkiiluhu aanu lug ku lahayn, lacagta waanu kuu soo diri karnaa.) Dadka deegaanka waxay u baahan yihiin inay bixiyaan macluumaadka aasaasiga ah oo ay ka jawaabaan su'aalaha codsiga. Waxaad u baahan tahay inaad siiso macluumaadka xiriirka mulkiilaha guriga. Uma baahnid inaad soo qaadato wax dukumeenti ah markaad codsanayso. CAA deegaankaaga ama ururka dhaqanka ku salaysan ee ka qayb qaadanaya barnaamijka ayaa kula soo xidhiidhi doona si ay kula shaqeeyaan haddii ay u baahan yihiin macluumaad dheeraad ah ama dukumeenti..
Mulkiilayaashu waxay la xidhiidhi doonaan CAA deegaanka ama ururka dhaqameed ee ka qayb qaadanaya barnaamijka marka la gaadho wakhtiga buuxinta macluumaadka iyo soo gudbinta dukumentiyada.
Milkiilaha Hantideyda ma u baahan yahay in uu soo diro warqadaha?
Si toos sidii lacag laguugu siiyo, Waa in uu milkiiluhu soo diraa dukumentiyo. Haddii aadan leheyn heshiis ijaareed ama kiro, milkiilaha gurigaaga waxaa laga rabaa in uu caddeeyo in uu leeyahay hantida. Waxay isticmaali karaan resiidka canshuurta ama warqadaha cadeenaya lahaanshaha hantida. Haddii aad leedahay shirkadda maamusha hantida, waxaa looga baahan yahay in ay caddeyaan in ay maamulaan hantida.
Maxaa dhaca kaddib marka aan soo gudbiyo arjigeyga?
Haddii aad online ka codsato: Kadib markaad gudbiso codsigaga, nidaamku wuxuu kuu soo diri doonaa bog macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa xiga ee la samaynayo. Marka CAA ay habayso codsigaaga, waxaad heli doontaa iimayl ogeysiinaysa inay ka fiirsanayaan. Tani waxay qaadan kartaa 4-6 toddobaad. Waxa kale oo aad heli doontaa iimayl marka CAA deegaanka ama ururka dhaqameed ee ka qayb qaadanaya barnaamijka ay ogolaadaan ama diidaan codsigaaga lacag bixinta. CAA deegaanka ama ururka dhaqameed ee ka qaybqaadanaya barnaamijka ayaa barnaamijka ku maamula gudaha waana inaad wacdaa haddii aad wax su'aalo ah qabtid
Haddii aad ku dalbato codsi warqad ah:Waxaad heli doontaa emayl ama wicitaan taleefan. Way ku soo wici doonaan ama kuu soo diri doonaan emayl marka ay helaan codsigaaga si ay kuugu sheegaan haddii ay oggolaadeen ama diideen codsigaaga. Haddii aad awoodo inaa gasho interneetka waxaad aadi kartaa bogga macmiilka ERA si aad u aragto meeshuu maraayo codsigaaga
Sidee kharashka loo siin doonaa milkiilaha hantida?
Marka CAA deegaanka ama ururka dhaqameed ee ka qaybqaadanaya barnaamijka ay helaan wax kasta oo ay u baahan yihiin oo aad uga baahan tahay mulkiilahaaga, waxay dib u eegi doonaan oo ay ansixin doonaan codsigaga. Waxay markaas lacagta ugu diri doonaan milkiilaha (milkiilaha) sida ugu dhakhsaha badan iyagoo jeeg ah ama si toos ah bangigiisa. Waxaa lagugu soo wargelin doonaa marka codsigaaga la ogolaado. Haddii mulkiilahaagu aanu ka qaybgalin, CAA deegaanka ama ururka dhaqameed ee ka qayb qaadanaya barnaamijka ayaa kaala shaqayn doona sidii aad lacagta u bixin lahayd.
Sidee ayaan ku caddeynaa in ay igu adag tahay bixinta kiradeyda ama danabka?
Waxa lagaaga baahan yahay in aad samaysid waa in aad muujisid ogeysiisyadii la soo dhaafay ee la xariira danabka ama kirada. Haddii ay kugu adkaato in aad bixisid kirada balse aad u baahan tahay kaalmo dhowrka bilood ee soo socda marka aad soo gudbisid arjigaada, waxaad saxiixday waa warqad sharci oo sheegeysa in aad u baahan tahay kaalmo. Ma bixin karni biilasha danabka mustaqbalka maxaa yeelay waa in aan haysano bayaanka aan ku bixino shirkadda danabka.
Aniga ma lihi mashiinka skaanka, waxaan haystaa koobiyada warqadaha aan u baahanahay in aan dalbado keliya. Maxaan sameyaa?
Waxaad qaadi kartaa sawir adiga oo isticmaala telefoonkaada gacanta kaddibna waxaa u diri kartaa CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka adiga oo isticmaala linkinga ay kuu soo direen ama email. Waxaad kaloo koobi ka samaysan kartaa warqadaha, waxaad keeni kartaa xafiiska ama waxaad ku soo diri kartaa boostada adiga oo ku soo hagaajiya CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka.
Waxaan u baahanahay buuxinta arjiga. Ma jiraa qof i kaalmeyn karo?
Haa. Waxaad soo wici kartaa CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka kaddibna waxay telefoonka kaala buuxin karaan arjiga. Waxaad kaloo weydiin kartaa xubinta qoyska ama saaxiib in uu kugu kaalmeeyo in aad ka buuxisid internetka.
Maxaa dhaca haddii ley diido? Racfaan miyaan ka qaadan karaa go'aanka?
Haa. Haddii aad dooneysid in aad racfaan ka qaadatid go'aanka, waxaad wixi kartaa CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijkada diiday arjigaada adiga oo u sheega in aad dooneysid in aad racfaan ka qaadatid. Qof ka duwan oo ku sugan CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka ayaa fiirin doono arjigaada. Haddii ay gaaraan go'aan la mid ah, waxaad racfaan ka qaadan kartaa MaineHousing adia oo naga soo waca 1-800-452-4668.
SU'AALAHA XAQ U YEELASHADA
Yaa xaq u leh kaalmada kirada?
Arjiileyaasha dagganaha waa in ay la kulmaan dhamaan sharuudahaan si loo tigeliyo kaalmada kirada:
Dakhliga reerkaada waa in uu la kulmo xuduudda dakhliga qaar. Xuduudda waxay ku kala duwan yahiin goobta iyo tirada reerka. Riix halkaan si aad u ogaatid xuduudda dakhliga.
Waa in aad qabtay dhibaato xagga maaliyadda inta uu socday cudurka faafa (laga soo bilaabo maarso 13, 2020).
Waa in ay kugu adag tahay in aad iska bixisid kiradaada ama danabka. Waxaa kaloo dhici karta in aad xaq u yeelatid haddii aad tahay gurilaawe.
Aniga waxaan dagganahay guryaha la kabo. Ma dalban karaa?
Haa Kahor intaadan dalban, fadlan hubi inaad u sheegtay maamulaha barnaamijka guryaha la kabo si ay wax uga bedelaan kiradaada haddii loo baahdo.
Ma loo baahan yahay in aan qaato manaafacaadka shaqo la'aanta si aan xaq ugu yeesho?
Maya. Bacdamaa aad u baahan tahay in aad la kullantid sharuudaha brograamka, uma baahnid in aad qaadatid shaqo la'aanta si aad xaq ugu yeelatid brograamkaan.
Aniga waajib ayay igu ahayd in aan yareeyo saacadaheyga/waxaa igu battay kharashka taasoo ugu wacan arrimaha xanaanada cunugga ee la xariira COVID-19. Ma dalban karaa?
Waxaan dagganahay guryaha lagu guuro, waan kireystaa dhulka aan dagganahay. Ma dalban karaa brograamkaan?
Haa. Brograamkaan wuxuu bixin doonaa kirada dhulka iyo/ama kirada guryaha lala guuro. Kuma jiraan khidmadaha meelaha la dhigto baabuurta.
Aniga ma ihi kireeste, Aniga waxaan qabaa deynta guriga. Ma jirtaa kaalmo aan heli karo aniga?
Nasiib darro, Barnaamijkan Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) waxaa heli kara kireesteyaasha oo keliya. Xafiiska Badbaadinta Macaamilka Maine (Maine Bureau of Consumer Protection) wuxuu maamuli doonaa Maaliyadda Kaalmada Milkiileyaasha Guryaha. Waxay halkaan ku soo qori doonaan wararkii ugu dambeyay. Waxaad sidoo kale ka wici kartaa 1-888-664-2569.
Maxaa dhaca haddii aan dakhli lahayn? Weli ma dalban karaa? Waajib miyay weli igu tahay in aan soo diro warqado?
Haddii uusan ku soo gelin dakhli, weli waxaad dalban kartaa barnaamijkan. Waxaad u baahnaan doontaa inad saxiixdo dukumentiyo sharci ah oo qeexaya inaadan haysan wax dakhli ah.
Aniga waxaan amaahday lacag si aan u bixiyo kirada/danabka ama waxaan kiradeyda/danabka ku bixiyay kaarka deynta. Ma ley celin karaa kharashka brograamkaan?
Maya, kuuma celin karno kharashka. Brograamkaan waxaa loogu talogalay kirada iyo danabka aan weli la bixinin. Hase ahatee, waxaan u baahan doonaa in aan soo amaahano lacag lagu bixiyo kirada sida caddeyn in aad kaalmo uga baahan tahay brograamkaan. Waxaad u baahan tahay in aad sidoo kale la kullantid sharuudo kale oo la xariira xaq u yeelashada.
Ma loo baahan yahay in aan ahaado qof shaqada ka luntay ama in aan ahaado qof dakhligiisa la yareyay si aan u dalbado?
Maya. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad la kullantid sharuudaha dakhliga, la kullantid dhibaato maaliyad inta uu socdo cudurka faafa, iyo kugu adag tahay in aad bixisid kiradaada ama danabka.
Maxaa dhaca haddii aan xooggaa ka badsado xadka dakhliga xaafadeyda? Ma jiraan wax aan samayn karo?
La xidhiidh CAA deegaankaaga ama ururka dhaqameed ee ka qayb qaadanaya barnaamijka wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaan u kireystaa in aan milkiyo. Ma dalban karaa?
Haa. Waad dalban kartaa hasee ahatee waa in uusan jirin qof ka tirsan reerkaada oo haysta milkiyadda guriga ama ku qoran deynta iminka jirta hantida. Adiga ama milkiilahaada hantida waxaad u baahan tahin in aad keentiin kirada ama heshiiska kirada.
Aniga waxaan ka kireystaa waalidiinteyda ama qaraabo kale. Ma dalban karaa?
Waxaad dalban kartaa oo keliya haddii aad daggan tahay guri gaar ka ah milkiilaha hantida. Tan macnaheeda waxay tahay in loo baahan yahay in aad gurigaada ku leedahay jiko iyo musqul. Waa in aad haysatid heshiiska kirada oo qoran oo horay u jiray iyo caddeynta in aad si joogto ah u bixin jirtay kirada.
Adiga xaq uma lihid haddii aad qaraabo tahiin, aadna si aan rasmi ahayn u bixisid kirada. Haddii aadan u baahneyn, waxaad la xariiri kartaa MaineHousing, telefoonka 1-800-452-4668 kaddibna waan ku kaalmeyn karnaa.
Aniga waxaa ila daggan qof kale, waxaan u baahanahay in leyga kaalmeeyo bixinta kirada balse saaxiibkey uma baahna. Ma dalban karaa?
Haa. Waxaad codsan kartaa qeybtaada kirada. Uma baahnid inaad ku darto dakhliga qofka kula deggan codsigaaga. Milkiilaha gurigaaga waxaa la siin karaa qeybtaada kirada haddii aad u qalanto. Haddii aad si toos ah u siiso mulkiilaha gurigaaga, milkiilahaaga waxaa laga codsan doonaa inuu soo bandhigo dokumentiyo gaar ah. Waxay macluumaadkaas ku heli doonaan iimayl marka aad codsato. Haddii aad kirada siiso qofka kula deggan, waxaad u baahan tahay inaad dirto dukumentiyada ku asteysan taariikhda lacag -bixinta
Ma loo baahan yahay in aan dib uga dhaco bixinta kirada si aan u dalbado?
Maya. Waxaad dalban kartaa in lagaa bixiyo kirada la soo dhaafay IYO/AMA kirada soo socoto. Halkii mar, waxaad awood u yeelan doontaa in aad dalbatid kirada la soo dhaafay ilaa 12 bil laga soo bilaabo Maarso 13, 2020 haddii loo baahdo iyo ilaa 3 bil oo ah kirada soo socoto.
SU'AALAHA INTA UU QABTO BROGRAAMKA
Maxay bixin doontaa maaliyadda kaalmada kirada?
Barnaamijkan Kaalmada Kirada Degdegga (Emergency Rental Assistance Program) wuxuu bixin karaa kirada iyo qaar ka mid ah danabka la qabo laga soo bilaabo Maarso 13, 2020. Barnaamijkani wuxuu kaloo bixin doonaa kirada iyo/ama korontada saddexda bilood ee soo socota.
Intee kiro bil kasta ayuu brograamkaan iga bixin doonaa?
Ma jiro dabool bil kasta saaran kaalmada kirada xaqa loo leeyahay. Haddii aad xaq u yeelatid, brograamka wuxuu bixin doonaa kharashka lacag bixinta lagu heshiyay kiradaada. Waxaad hal mar dalban kartaa kirada laguugu leeyahay laga soo bilaabo Maarso 13, 2020, ilaa 3da bil xigta kirada soo socoto. Tusaale, waxaad dalban kartaa Agoosto 2021 kaddibna arjiga wuxuu bixin karaa kirada Sateembar, Oktoobar, iyo Nofeembar 2021 IYO kirada la soo dhaafay aad qabtid. Brograamkaan wuxuu bixin karaa iskudarka ilaa 12 bil oo ah kiradaada iyo/ama danabka.
Weli ma heli doonaa kaalmo ku saabsan bixinta kiradeyda kaddib marka brograamka iga bixiyo saddaxda bil hore?
Haa. Waxaad heli kartaa ilaa 12 bil oo ah iskudarka kirada. Marka 3da bil hore dhamaato, CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka ayaa kula soo xariiri doonto kaddibna ku weydiin doonto haddii aad weli u baahan tahay kaalmo. Kaddibna waxaa suurtogal ah in aad qaadatid kaalmada kirada/lacagta danabka muddo saddax bil oo kale.
Ma dalban karaa maaliyad oo iga kaalmeysa danabka, xattaa haddii aan u baahanin kaalmada kirada?
Haa, kireesteyaasha waxay dalban karaan in laga kaalmeeyo bixinta kharashka danabka haddii aysan u baahneyn kaalmo xagga bixinta kirada. Waxaad u baahan tahay in aad muujisid xisaabta la soo dhaafay iyo midda hadda socoto adiga oo bayaanka ugu dambeyay ka soo qaata shirkadda/shirkadaha danabka.
Brograamka ma bixin karyaa biilasheyda danabka mustaqbalka sida uu u bixiyo kirada?
Maya, Waxaan u baahanahay bayaanka iminka jira ama biilka si aan kharashka u siino shirkadda danabka.
Maxaan u baahanahay in aan sameeyo haddii ay jiraan dagganeyaal soo dalbada?
Waxaad u baahan tahay in aad u jawaabtid CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka muddo dhowr maalin gudahooda ah: 5 maalin haddii ay ku soo wacaan ama ay kuu soo diraan imayl, ama 7 maalin haddii ay kaala soo xariiraan warqadaha lagu soo diro boostada. Haddii aadan ku soo jawaabin waqtigaas, dagganahaada wuxuu baddal ahaan heli doonaa maaliyadda barnaamijka.
Maxaan ogolaan doonaa haddii aan ka qaybgalo?
Markaad kaqaybqaadato barnaamijkan, waxaad ogolaatay inaadan qaadin wax talaabo oo ah inaad ka saarto kiraystahaaga howyga sabab ah bixinta kirada ama kharash kasta oo laxiriira bil kastaba ha ahaatee lagasoo bilaabo Maarso 2020 ilaa maanta ama bilaha kasta oo looga bixiyo barnaamijkan. Waxaad kaloo ku raacsan tahay inaadan kordhin kirada kiraystaha in ka badan 5% muddo 12 bilood gudahood ah. Haddii kiraystahaagu yahay ama noqdo kirayste sida uu doono, waxaad oggolaatay inaadan bilaabin ka saarid aan sabab lahayn inta lagu jiro bilaha lagaaga siiyo Barnaamijka Kaalmada Kirada Degdegga ah.
Ma u dalbi karaa kaalmada kirada aniga oo mattalaayo dagganeyaasheyda?
Waxaad kaalmeyn kartaa dagganeyaasha in ay buuxiyaan arjigooda. Waxaad kaloo bilaabi kartaa hawsha adiga oo waca CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka kaddibna weydiiya arjiga milkiilaha hantida. Halkaas, waad buuxin doontaa kaddibna waad gudbin doontaa. CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka ayaa la soo xariiri doonto dagganaha.
Ma jirtaa xad ku saabsan tirada dagganeyaasha aan haysto marka aan isticmaalo brograamkaan?
Sidee leygu siin doonaa mushaarka?
Waxaa lacag laguugu soo diri doonaa Keydka Tooska (Direct Deposit) ama jeeg taasoo ku xeran macluumaadka aad bixisay.
Maxaa dhaca haddii ley siiyo kharashka dhowrka bil soo socda kaddibna dagganaheyga guuro? Waajib miyay igu tahay in aan dib u bixiyo kharashka brograamka?
Haa. Waxaad dib u bixin kartaa brograamka bil kasta uusan dagganaha dagganeyn guriga.
Maxaa dhaca haddii aan go'aan ku gaaro in aan rabin in aan ka qeybgalo?
Waxaan rajeyneynaa in milkiileyaasha hantida rabaan in ay ka qeybgalaan brograamka balse ma dalban karno in adiga aad sidaas samaysid. Hase ahatee, dagganahaada wuxuu dalban karaa brograamkaan adiga la'aantaa sidaasna wuxuu ku heli karaa maaliyadda. Haddii aadan rabin in aad ka qeybgashid, fadlan ogeysii CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka marka ay kula soo xariiraan.
Maxaa dhaca haddii dagganaheyga diido in uu ka qeybgalo? Weli ma ku dalban karaa magacooda?
Waxaan rajeyneynaa in dagganeyaasha ka qeybgalaan hase ahatee kuma qasbi karno in ay dalbadaan. Kuma dalban kartid magacooda.
Racfaan miyuu qaadan karaa dagganaheyga haddii la soo diido arjigooda?
Haa. Haddii dagganahaada doono in uu racfaan ka qaato go'aanka, waxay wacaan CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka kaddibna waxay u sheegaan in ay rabaan in ay racfaan ka qaataan. Qof ka duwan oo ku sugan CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka ayaa fiirin doono arjigooda. Haddii CAA maxalli ah ama urur dhaqameed oo ka qayb qaadanaya barnaamijka gaarto go'aan la mid ah, waxaa dhici karto in qofka kuu daggan uu racfaan ka qaato MaineHousing marka uu naga soo waco 1-800-452-4668.
Racfaan miyaan ka qaadan karaa go'aanka CAA anigoo mattalaaya go'aanka uu gaaray dagganaheyga?
Maya, hase ahatee, waxaad bilaabi kartaa racfaan adigoo mattala naftaada.
Dagganaheyga wuxuu soo dalbaday brograamkaan kaddibna wuu guuray. Waxay weli iga qabaan kirada la soo dhaafay/aan la bixinin. Maxaan sameyaa?
Buuxi warqadaha hadba sida la soo codsaday. Waxaan bixin doonaa kirada aruurtay/aan la bixinin haddiiba dagganaha daggan yahay guriga marka uu soo dalbaday IYO xaq u leeyahay brograamka.